avril 2020 – Trinitera Malagasy
2 avril 2020 Njara Pascal
Vakiteny I : Jeremia 20,10-13, Salamo 18 (17) 2-3a.3bc-4.5-6.7, Evanjely : Md Joany 10,31-42. Miverimberina ao amin’i Jeremia ny fanankinana ny zavatra rehetra (ady) amin’Andriamanitra izay mamantatra ny voa, (כִּלְיָה kil’yah, siège de l’emotion et d’affection: ny fietseham-po) sy ny fo (לֵב leb, l’homme interieur: ny atifo) (Sabotsy IV karemy Jer 11). Manoloana ny haratsian’ny sasany…
1 avril 2020 Njara Pascal
Vakiteny I : Jenezy 17,3-9, Salamo 105 (104), 4-5.6-7.8-9, Evanjely : Md Joany 8,51-59. Tsy manirery isika mizotra mankany amin’ny Paka fa miara-mizotra (syn-odos) ary tohanan’ny Fiangonana manontolo, ary manovo harena avy amin’ny traikefan’ireo efa nialoha lalana antsika tamin’ny finoana. Razambentsika mpino i Abrahama izay tonga rain’ny firenena tsy hita isa. Nampanantenain’ny Tompo azy ny tanin’ny…